Xeebaha ugu fiican ee Granada, booqashada Costa Tropical | Wararka Safarka
Xeebaha ugu fiican Granada
Luis Martinez | | Granada, Xeebaha
ka Xeebaha Granada waxay yihiin muunad ka mid ah erayada gaarka ah ee gobolkan Isbaanishka. In kilomitir aad u yar, dhulalka Granada waxay ka gudbaan meelaha sare Mulhacen, Sierra Nevada (halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan buurtan), ilaa xeebta Mediterranean. Sababtan awgeed, meelaha qaarkood xeebta weli waa dhaadheer.
Si kastaba ha ahaatee, tani caqabad kuma aha xeebta Granada (oo lagu yaqaan Tropical Costa) waxay leedahay meelo ciid ah oo aad u fiican oo aad ku raaxaysan karto qorraxda ama qubayska. Guud ahaan, siddeed iyo toban degmo ayaa ka kooban xeebta gobolkan, kuwaas oo qaarkood ay leeyihiin goobo dalxiis oo aad u weyn. Tani waa kiiska, tusaale ahaan, ee Motril, Salobrena o Almunecar. Laakiin, iyada oo aan loo baahnayn, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Granada.
1 Laga soo bilaabo Almuñécar ilaa Albuñol
1.1 Xeebta San Cristóbal
1.2 Xeebta La Charca
1.3 Calahonda, mid ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Granada
1.4 Xeebta Torrenueva
1.5 Xeebta Rijana
Laga soo bilaabo Almuñécar ilaa Albuñol
Jasiiradda Costa Tropical waxay ku taal meel aad u yar oo ku taal xeebta Mediterranean. Iyagu waa sideed boqol oo kiilomitir oo laba jibbaaran oo caasimaddeeda aan rasmiga ahayn waa tii hore loo sheegay Motril. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay xeebo qurux badan oo raaxo leh. Waxaan kaala hadli doonaa wax ku saabsan qaar.
Xeebta San Cristóbal
Sidoo kale loo yaqaan de Shiinaha, waa xeebta ugu weyn ee magaalada Almunecar. Waxay dhererkeedu ka badan yahay kiiloomitir ballackiisuna waa ilaa konton mitir. Halabuurka waxaa ka mid ah ciid mugdi ah oo biyihiisu deggan yihiin.
Waxa kale oo aad xiisayn doontaa inaad ogaato cidda haysa abaalmarinta calanka buluugga ah iyo Q oo tayo leh, kaas oo ku habboon dadka naafada ah oo leh meel baabuurta la dhigto. Waxay kaloo leedahay dhammaan qalabkii. Waxaa jira adeeg badbaadiye, maydhasho, kiro hammock, adeeg nadiifin iyo xitaa xafiiska dalxiiska, baararka iyo makhaayadaha agagaarka.
Si kastaba ha ahaatee, maahan xeebta kaliya ee aad ku raaxeysan karto Almuñécar. Iyaguna aad bay u qurux badan yihiin Cantarrijan, la ururiyey oo leh dhaqan qaawan oo dheer; ee Velilla, kugu habboon inaad ku tababarto quusidda, ama tan Albaabka Badda, sidoo kale reer magaal.
Dhinaca kale, maadaama aad joogto Almuñécar, waxaan kugula talineynaa inaad booqato magaaladan quruxda badan ee Granada. Meelaha sida qalcaddii San Miguel, qalcad asal ahaan muslimiin ah oo magaalada korkeeda ka talisa. Laakiin waxaad sidoo kale booqan kartaa haraaga marin biyoodka iyo qubeysyada Roomaanka ama kuwa quruxda badan Qasriga Najarra, oo la dhisay qarnigii sagaal iyo tobnaad ka dib markii la raacay canons of style neo-Arab.
Ugu dambeyntii, waxaad arki kartaa xiisaha Godka Madxafka Qadiimiga ah ee Toddobada Qasri, beerta botanical ee hawthorn iyo Iskutallaabta Quduuska ah, halkaas oo aad ku leedahay aragti bixisa aragtiyo cajiib ah xeebta Granada.
Xeebta La Charca
Sidoo kale loo yaqaan ee Salomar, waa xeebta ugu weyn ee magaalada Salobrena. Waxay dhererkeedu yahay siddeed iyo toban boqol oo mitir, ballaadhkeeduna waa qiyaastii lixdan iyo afar mitir. Waxaa ku hareereysan socod qurux badan, waa xeeb ku habboon qoysaska.
Intaa waxaa dheer, xeebtaani waxay leedahay dhammaan qalabkii lagama maarmaanka u ahaa in joogitaankaagu ku raaxaysto. Waxay leedahay adeeg samatabbixin, musqulo iyo qubaysyo, jeexjeexyo iyo xitaa kiraynta doonyaha.
Sidoo kale, mid ka mid ah darafyadiisa ayaa ah Dhagaxa Salobreña, meel bannaan oo dabiici ah oo lagu ilaaliyo qiimaheeda deegaan ee sarreeya. Dhirteedu waxay wakiil ka tahay dhagxaanta badda ee caadiga ah ee xeebta Granada waadna booqan kartaa sannadka oo dhan.
Kani maahan xeebta kaliya ee lagu taliyay degmada. Kuwii waardiyaha, dhinaca kale ee dhagaxa; ee Webiga Point, oo ku yaal meel dhoobo iyo Cambrón iyo Caletón coves.
Dhinaca kale, maadaama aad joogto Salobreña, ka faa'iidayso fursadan si aad u booqato magaaladan quruxda badan. Ha joojin fuulitaanka cajiibka ah qalin taas ayaa ka talisa oo muslin ahaan qaab ahaan. Sidoo kale, xaafadaha sida El Brocal iyo Albaicín waxaad ka heli doontaa waddooyin cidhiidhi ah oo leh guryo cadcad oo ubaxyo ka buuxaan.
Ugu dambayn, booqo Kaniisadda Our Lady of Rosary, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad ka dib markii la raacay canons of style Mudejar. Munaaraddeeda ayaa taagan, oo dusha sare ka saaran saqafyo jaranjaro ah, iyo albaabka dhinaceeda, oo lagu sharraxay foorno. Si kastaba xaalku ha ahaadee, halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal gebi ahaanba loogu talagalay Salobreña.
Calahonda, mid ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Granada
Hadda waxaan u jeednaa degmada Motril inaan kuu sheego aag bacaad leh oo ka muuqda dhammaan tusayaasha xeebaha ugu wanaagsan Granada. Waxay ku saabsan tahay mid cajiib ah CalahondaSidoo kale waa magaalo, inkasta oo leh qaabab sifo leh, maadaama ay xeebta ka abuurto nooc “S” ah.
Waxay leedahay dherer ku dhow XNUMX mitir iyo ballac dhexdhexaad ah konton. Biyihiisu way deggan yihiin, in kasta oo ay furan yihiin oo ku habboon tahay dabaysha iyo dabaysha. Dhanka aagga bacaadka ah, waxaa ku jira quruurux. Waxay kaloo leedahay dhammaan adeegyada laga yaabo inaad u baahato: samatabbixin, musqulo iyo qubeys, baarkin, xamaamyo iyo dallado. Nawaaxiga, waxaad sidoo kale ku leedahay baararka iyo maqaayado badan iyo sidoo kale hoy iyo a kaambada.
Xeebtaani waa mid aad u qurux badan oo aad u qalabeysan oo leh kala sooc calanka buluugga ah iyo Q oo tayo leh. Midig darafyadiisa midkoodna ku dheggan yahay waa Xeebta Granada, xoogaa yar, laakiin sida aan caadiga ahayn.
Kaliya maahan meelaha ciidda caanka ah ee degmada Motril. Waxaan kaloo kugula talineynaa inaad aado xeebta La Joya, ka yar oo aad u soo dhoweynaya joogitaanka dhammaadka dhagaxa. Si kastaba ha noqotee, duruuftani waxay ku niyad jabin kartaa, maadaama si aad u hesho waa inaad hoos ugu dhacdaa ilaa laba boqol oo tallaabo. Ka dibna u rar iyaga si ay uga baxaan.
Ka weyn kii hore waa xeebaha Galbeed, oo ku yaal El Varadero, halkaas oo ay sidoo kale ku taal dekedda Motril, iyo tii carchuna, cagtiisa Cape Sacratif, halkaas oo aad ku arki karto laydh la dhisay 1863kii.
Laakiin waxaad leedahay waxyaabo kale oo badan oo aad ku arki karto Motril. Waxa ugu horreeya ee soo jiidan doona dareenkaaga magaaladan quruxda badan ee Granada waa warshadaha sonkorta badan ee ay hore u lahayd. Tusaalaha iyaga ayaa ah kuwa Nuestra Señora del Pilar iyo Nuestra Señora de las Angustias, oo sidoo kale loo yaqaan ee Fabriquilla.
Waa inaad sidoo kale aragtaa hadhaagii Candelon, marin biyood hore oo laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Sida dhismayaasha diimeed, waxay iftiiminayaan Kaniisadda Weyn ee Jidhka, oo lagu dhisay qaabka Gothic-Mudejar, iyo Quduuska Marwadayada Madaxa, oo ku yaal Cerro de la Virgen oo ay ku yaalliin sawirkii ilaaliyaha Motril.
Dhinaceeda, dhismayaasha madaniga ah ee magaalada Granada waxaan kugula talineynaa inaad soo booqato guriga Countess of Torre-Isabel, oo leh qaabkeeda neoclassical, iyo Guriga Bates, oo leh laba beerood, Generalife iyo Jiilaal. Sidoo kale, Masraxa Calderón de la Barca, oo leh qaab qolof leh; kii hore Isbitaalka Santa Ana, ku lifaaqan kaniisadda Divina Pastora iyo dhismaha Hoolka Magaalada, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad.
Torrenueva, mid ka mid ah xeebaha ugu fiican Granada
Waxay ku taallaa magaalada homonymous of Xeebta Torreneva, waa mid ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Granada. Waxay leedahay baaxad ka yar hal kilomitir iyo badh waxayna ka kooban tahay ciid mugdi ah iyo jay. Biyaheedu waa deggan yihiin oo nadiif yihiin.
Waxaas oo dhami waxay ka dhigaan xeebtaan magaalo midda ugu habboon ee aad la tegi karto qoyskaaga. Sababtoo ah, marka lagu daro, waxay ku siinaysaa dhammaan adeegyada. Waxaa jira samatabbixin, musqulo iyo qubeys, qolalka qorraxda iyo dalladaha dalladaha, helitaanka dadka naafada ah iyo xitaa meelaha cagaaran iyo kubbadda cagta iyo kubbadaha laliska.
Sida haddii waxaas oo dhami aysan ku filnayn, agagaarkeeda waxaad ku leedahay baararka badan iyo baararka xeebta oo aad wax ku cuni karto. Ka dibna waxaan kugula talineynaa inaad soo booqato magaaladan quruxda badan, oo ay dejisay dhagaxa Jolúcar. Way ka dhex muuqataa munaaraddii waardiyaha, oo la dhisay qarnigii XNUMX -aad si looga ilaaliyo xeebaha weerarada burcad -badeedda. Ceelka qarnigii XNUMX -aad oo dib u xusuusanaya waayihii beeraha ee aagga ayaa sidoo kale mudan inaad booqato.
Ugu dambayntii, waxaan kugula talineynaa inaad u soo dhawaato Fagaaraha Antonio Cortés, halkaas oo aad ku arki doon doon kalluumeysi sidii taallo lagu maamuusayo kalluumeysatada magaalada. Iyo sidoo kale inaad booqato kaniisadda Our Lady of Carmen, oo ka weyn boqol sano.
Ugu dambayn, waxaan kuu sheegi doonnaa xeebtaan ku taal magaalada Gualchos-Castell de Ferro. Ku dhowaad bikro ah oo aan waligeed shaqo badan qabin, waxay kugu habboon tahay inaad maalin xasilloon oo aad quusto ku tababarto, maadaama nolosheeda baddu aad u hodan tahay.
Hadhowna, haddii gaajadaadu soo baraarugtay, waxaad dhadhamin kartaa qaar ka mid ah cuntooyinka macaan ee Granada. Tusaale ahaan, jajabka laga sameeyey bur qamadi, cawsha ama kalluun cusub oo xeebta ka yimaada. Laakiin, haddii aad rabto wax ka xoog badan, waxaad leedahay dheriga San Antón, fuud digir ah, digir ballaaran oo la qalajiyey, bariis iyo sausage dhiig. Ugu dambayn, sida macmacaanka, waxaad leedahay caano duudduuban ama keegga boqornimada.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah xeebaha ugu fiican Granada. Iyaga dhexdooda waxaad ku raaxeysan doontaa maalin aad u qurux badan oo aan la ilaawi karin Costa Tropical. Laakiin waxaa jira xeebo kale oo si isku mid ah lagula taliyay. Tusaale ahaan, waad garan kartaa kuwa La Herradura iyo Los Berengueles gudaha Almuñécar ama ee Ruushka Albuñol, oo ah damac yar oo aan la daboolin oo aad ku heli karto oo keliya lug ama badda. Cajiib, waxay heshay magacaas maxaa yeelay muhaajir ka yimid Midowgii Soofiyeeti ee hore wuxuu degay 1921. Si kastaba xaalku ha ahaadee, midna xeebahaas midna kuma niyad jabin doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Xeebaha » Xeebaha ugu fiican Granada